Mila omanina dieny izao ny sainy mpifidy mandritra ny fifidianana - Madagascar Informations
12 mars 2018 Madagascar Informations Aucun commentaire
Antony hikarakarany mpianatra eo anivony IEP tetik’asa ho entina hanabeazana ny olom-pirenena mahakasika ny politika ka nampitondraina ny anarana hoe HAY POLITIKA eo ihany koa ny fandraisana andraikitra feno ny tanora ao amin’ny IEP amin’ny maha olom-pirenena feno azy ireo .
Amin’ny alalany ady hevitra an-databatra boribory no hanatanterahana ny tetik’asa ka hanasana ireo kandida efa nanambara fa anisany hilatsaka ho filoham-pirenena , fiarahamonim-pirenena ,mpampianatra sy ireo liana amin’ny loha-hevitra .
Noferana isakin’ny Zoma farany volana ny ady hevitra ka natao isam-bolana ary haharitra ora 2 .
Anisany loha –hevitra ho velabelarina ny hoe afaka ny ho voavonjy ve I Madagasikara ,aiza ny ho aviny tanora rahampitso sy ny ny hoe inona no maha zava –dehibe ny fitondrana tsara tantana .
← Handray fanapahan-kevitra hentitra ny fikambanan’ireo gadra politika.
Le Secrétaire d’Etat français à Antananarivo →